Wax ka habeynta WordPress Permalinks | Martech Zone
Ku habeynta WordPress Permalinks
Axad, Agoosto 23, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Markii ugu horreysay ee aan billaabo baloogga, waxaan doorbiday heerka Permalink qaab dhismeedka oo ay ku jiraan taariikhda, bisha iyo maalinta boostada:
Maaddaama balooggeygu ku koray caannimada oo aan wax badan ka bartay dhismayaasha isku xirka, waxaan ogaaday in qaab-dhismeedkan laga yaabo inuu leeyahay xoogaa faa'iido-darro ah:
Raadiyayaashu isla markiiba way aqoonsan karaan haddii qoraalka balooggu duq ahaa ama dhawaa. Ayaa doonaya inuu akhriyo waxyaabaha hore markii wax cusub la heli karo? Haddii baarayaashu arki karaan taariikhda dhismaha permalink, way iska indho tiri karaan qoraaladaadii hore inkasta oo ay wali quseeyaan.
Qaar ka mid ah khubarada hagaajinta mashiinka raadinta waxay aaminsan yihiin in kala-bixiye kasta ("/") uu tilmaam u yahay kala sarreynta galka sidaa darteedna inta sii kordhaysa, ay muhiimaddaadu yarayd waa in ay ahaataa (jajabyo badan ayaa ka dhigan in lagu aasay qotada galka). Haddii aad ku hayn kartid qoraal kasta hal qayb, waxay abaabulaysaa waxyaabaha ka kooban 2 heer oo kala sarreeya ah… taasoo la micno ah inay ka sii muhiimsan tahay.
Khabiiro kale oo SEO ah ayaa sidoo kale isku raacay in adeegsiga ereyada muhiimka ah ee qaybaha ay tahay xeelad ku habboon hagaajinta mashiinka raadinta. Hubso inaad magacawdo qaybahaaga adoo adeegsanaya keywords keywords ama weedho, in kastoo!
Ma Bedeli Kartaa Qaabdhismeedka Permalink?
In muddo ah, in kastoo aan ku dhuftey qaabdhismeedka 'permalink' waxaan asal ahaan u dejiyey bloggeyga with ma aha kiiska! Haddii aad jeceshahay inaad bedesho qaabdhismeedka 'permalink', Dean Lee wuxuu soo saaray aalad si otomaatig ah u soo saareysa 301 dib u habeyn loogu baahan yahay in laga beddelo hal nooc oo ah 'permalink' oo loo beddelo qaab kale.
Xirmo marti-gelin qurux badan leh oo leh nidaam maareyn dib-u-hagaajin adag ayaa ah WPEngine (Taasi waa isku xirkeena xiriirka). Waxaan leenahay horumariyo tibaaxaha joogtada ah qaar badan oo ka mid ah macaamiisheenna si ay ugu ilaaliyaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta mashiinka raadinta bogagga hadda la dhaqaajiyay.
Shirkadaha Xiriirka Dadweynaha waxay diyaar u yihiin inay adeegsadaan Baraha Bulshada
Shan Cashar iyo Hal Sir oo weyn oo Blogging Deg deg ah
Aug 24, 2009 at 4: 10 AM
Tip fiican, Doug. Had iyo jeer waxaan u maleynayay in WordPress uu si otomaatig ah u maareeyay jihooyinka (sida Drupal). Waxaan qiyaasayaa inaan qaldamay. Waad ku mahadsantahay tilmaamida qalabkan waxtar leh. Hadda waxaan la yaabanahay haddii aan dib u booqdo qaab-dhismeedka isku xirka boggeyga.
Agoosto 24, 2009 saacaddu markay ahayd 2:48 PM
Tilmaam weyn, sida had iyo jeer, Doug.
Agoosto 24, 2009 saacaddu markay ahayd 4:43 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaadkan Douglas!
Agoosto 28, 2009 saacaddu markay ahayd 2:25 PM
Faahfaahin fiican. Waxaan tan ku dejiyay barteyda… Sideed ku sheegtaa qaybta loo adeegsado 'permalink' haddii aad u xusho wax ka badan hal nooc oo boostada ah?
Qiimo jaban SSL
Jan 5, 2012 at 6: 50 AM
-Iyadoo la horumarinayo WordPress 3.3 muhiim ma ahan in la bilaabo tiradaada saxda ah ee tiro. Waxaan sameeyaa wax ah in a% / postname% qaab-dhismeedka uu yahay ikhtiyaarka ugu fiican ee kor u qaadista in kastoo, maadaama aad si fudud ugu wareejin karto qoraallada / bogagga qaybaha kala duwan adigoon ka walwalin arrimo kasta.
Shahaadooyinka SSL ee jaban
Febraayo 23, 2012 saacadu markay tahay 2: 21 AM
Marka hore, aan kuugu mahadnaqo wadaagista maqaalka muhiimka ah ee ku saabsan ganacsiga ganacsiga iyo tan labaad qodobbadaada ku saabsan faa'iido darrooyinka isku xirka xiriirku runti waa kuwo waxtar leh. Runtii waan ku dhiirigelinaynaa maqaalkaaga oo hadda waxaan sidoo kale aaminsanahay in qaabdhismeedka 'permalink' uu runtii waxtar u leeyahay helitaanka xiisaha baarayaasha iyo u fiirsashadooda